Posted by Sandakuu on July 28, 2011
ခရစ္စတလ် July 28, 2011 at 4:55 AM
အစ်မ လေဆိပ်ကနေ နှစ်နာရီလောက် မောင်းရတယ်ဆိုတော့ ဘယ်မြို့ကို သွားရတာလဲ ဟင်
ရှုခင်းလေးတွေ လှတော့ သိချင်လို့ပါ :)
Evy July 28, 2011 at 5:55 AM
ပုံတွေကြည့်ပြီး သရေယိုသွားတယ် ကူးကူးရေ။ စပျစ်ခြံကလဲ လှလိုက်တာနော်
Anonymous July 28, 2011 at 7:59 AM
တပုဒ် ထဲနဲ့ အမကြီးကို အသက်ထွက်အောင်လုပ်လိုက်တာလား စားချင်စရာ လည်ချင်စရာ
အောက်ဆုံးက တမွှာဆို တမွှာလေး ကို စားလိုက်ရရင် ကို မဆိုးပါဘူး
တောက်ပကြယ်စင် July 28, 2011 at 8:37 AM
ကူးကူးရေ စပျစ်သီးကို တွေ့တော့ ဟိုး.....................ငယ်ငယ်က ဘုန်းဘုန်းတို့အိမ်ခြံထဲမှာ ရှိတဲ့ စပျစ်သီးကို ပြန်မြင်ယောင်မိတယ်။ တစ်ပင်ထဲရှိတာပါ။ ကူးကူးလည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေက အရမ်းလည်ချင်စရာ ကောင်းတယ်နော်။ ဒူးသီးရင်းကလည်း အသားတာမည်းတာ အသည်းတော့ဖြူတယ်ဆိုတာမျုိးပေါ့နော်။ ခွေးတွေတွေ့တော့ ပြေးကြရောလား။ဘယ်လိုလုပ်ကြလည်း။ မျက်နှာကို လေးပုံတစ်ပုံပဲ ရိုက်ထားတယ်။ အဲဒါ ထိုင်းသူလေးလား...ဟင်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကူးကူးရေ...
မြစ်ကျိုးအင်း July 28, 2011 at 9:37 AM
စပျစ်သီးတွေက သီးနေတာ အားရစရာကြီးပဲ။
ဆောင်းနှင်းရွက် July 28, 2011 at 10:55 AM
စပျစ်သီး .. မင်းဂွတ်သီး၊ ဒူးရင်းသီးး
အို .. အဲ့လို ခြံထဲသွားပြီး စားချင်လိုက်တာ ..း))
...အလင်းစက်များ July 28, 2011 at 1:09 PM
မကူး..... တုံယမ် အရောင်က တစ်မျိုးပဲ.... အတော်များများက အနီနဲ့အုန်းနို့ ထည့်ကြတော့ အဖြုရောင်စွက်တယ်ဗျ။ ဒါလည်း စတိုင် တစ်မျိုးနေမှာပေါ့။
စပျစ်သီး၊ မင်းဂွတ်သီး..... အဲ ဒူးရင်းသီးတော့ စားလေ့ မရှိလို့မသိဘူး။ သူတို့(ထိုင်းတွေ) ပြောပြတာတော့ ဒူးရင်းသီးက King of fruit တဲ့ အပူဓါတ်ဆောင်တယ်...။ မင်းဂွတ်သီးက Quine Of Fruit တဲ့ဗျ... အအေးဓါတ်ဆောင်သတဲ့လေ.... တစ်ခုစားတာ များလို့မအီမလည်ဖြစ်တဲ့ အခါ နောက်တစ်မျိုးကို စားပေးရတယ်တဲ့ဗျားးးးးးးးးးး။ ကဲ...... ၂ မျိုးလုံးသာ တွဲစားလိုက်ကြပါတော့လို့ ........
စန္ဒကူး July 28, 2011 at 9:19 PM
ခရစ္စတလ် - Saraburi , Muak Lek ဘက်မှာ ညီမ...
Evy - ဟုတ်တယ်.. စပျစ်ခြံက အကျယ်ကြီး သိပ်လှတာ.. အသီးလေးတွေနဲ့တွေ့ရတော့ ပိုပျော်တယ်သိလား..
အမရွှေစင်- ဥလေးလား... တစ်မွှာ ပို့ပေးမယ်နော်သိလား...း))
တောက်ပကြယ်စင် - ဟုတ်ပါ့.. ဒူးရင်းသီးလိုလူတွေလဲရှိမှာ.. အမြင်မှာတော့မတင့်တယ်..အထဲမှာ တော့ အနှစ်ချည်းဘဲဆိုတာ..
မျက်နှာက လေးပုံတစ်ပုံ... ဟီးးးးးး ပုံပြခွင့်ရ၀ူးတဲ့...
ထိုင်းသူတော့မဟုတ်.. မြန်မမလေးစစ်စစ်ပါ.. မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသားနှစ်မျိုးနဲ့ မြန်မာနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံက လူမျိုး ၂ မျိုးနဲ့ လေးမျိုးစပ်.. ကကတစ်.. ဟူးးးးးး
မြစ်ကျိုးအင်း -- ဟုတ်တယ်.. အတုံးအတစ်လိုက်ဘဲ..
ဆောင်းနှင်းရွက် -- မလေးမှာ..ပန်ဂိုးisland ရောက်တုန်းကလေ ဒူးရင်သီးကြွေတာထိုင်စောင့်ပီးဝယ်စားဖူးတယ်.. သိပ်အရသာရှိတာ.. ပင်မှည့်..း))
အလင်းစက်များ-- တုံမ်ယမ် အကြည်မောင်လေးရဲ့... အုန်းနို့ထည့်တာ အမမကြိုက်လို့.. ဒူးရင်းသီးနဲ့ မင်းဂွတ်သီး အမြဲတွဲစား ဖြစ်တယ်..း)
Mrs. Bagel July 29, 2011 at 1:10 AM
အစ်မ၊ အသိမရှိရင်ရော၊ သွားရတာအဆင်ပြေလား? ကားငှါးတာတို့လေ။ အစ်မ ရေးထားတာဖတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားလို့။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ July 29, 2011 at 1:28 AM
နဖူးလေးတော့ မြင်ဖူးသွားတယ်း)))
T T Sweet July 29, 2011 at 7:44 AM
ကူးကူးရဲ့ ရှူခင်းပုံလေးတွေ လှလိုက်တာ။ အဲလို တောရွာ၊ယာခင်းလေးတွေ လျှောက်လည်ချင်တယ်။
အပေါ်က ငါးကင်ကတော့ စပျစ်သီးထက်ပိုကြိုက်။း)
နဖူးလေး၊မျက်လုံးလေး နဲ့ အသားလေးကလည်း စပျစ်သီးတွေနဲ့ အလှချင်းပြိုင်နေသလိုပါလား။
စန္ဒကူး July 30, 2011 at 1:11 PM
မြတ်ကြည် -- ညီမ အသိမရှိရင်တော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး.. ဘယ်နိုင်ငံ ရောက်ရောက်လေ.. မြေခံ ရေခံ လေးအသိတစ်ယောက်လောက် ရှိမှပိုအဆင်ပြေတာ..
အိမ့်ချမ်းမြေ့ -- မမ ကူးကူးနှဖူး မဟုတ်.. ဟီးးဟီးး.. ညီမလေး အဲဒါ..
T T Sweet-- ရှုခင်းလေးတွေသိပ်လှတယ်.. ငါးကလဲကောင်းမှကောင်း.. ဖြစ်နိုင်ရင် ပါဆယ်တောင်ပို့ပေးချင်သေးတီဆွိ.. အော်ဇီက ဝေးတယ်.. ဟီးဟီးး
အို်င်အိုရာ.. အဲဒါညီမလေးပုံ... ဟီးး... နဖူးကျယ်လို့တဲ့ ဆံပင်အရှေ့ချထားတာ..
Shinlay July 31, 2011 at 6:18 AM
တီချမ်း August 4, 2011 at 4:08 AM
မိုက်တယ် သွားအုံးမှာဘဲ ဘန်ကောက်မှာသာနေတာ ဘယ်မှမရောက်
ဒီမှာတော့ ဈေးမှာ ၀ယ်မရတဲ့အပင်တွေ ခြံဝင်း တစ်နေရာမှာစိုက်ခင်းလေး တွေလုပ်ပြီးစိုက် ကြတယ်၊ နိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေအကြိုက်ခြင်းကလဲမတူကြဘူး။ စိုက်ခင်းလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု လိုက်ကြည့်ရင် ဘယ်နိုင်ငံသူရဲ့စိုက်ခင်းလဲခန့်မှန်းလို့ရတယ်။ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း စိုက်တဲ့ စိုက်ခင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူများစိုက်ထားတဲ့ကိုယ့်နားကအခင်းတွေပါ ပါတယ်နော်. အထင်မကြီးနဲ့အုံး။း))
စပါးလင် ဆူးပုပ် (ထိုင်းကနေ ကိုင်းဖြတ်လေးတွေယူလာပြီးစိုက်ထားတာပါ၊ အညွန့်လေးတွေထွက်တဲ့ နေ့တုန်းက ဒီကမ္ဘာမှာအပျော်ဆုံးသူကိုယ်ပေါ့).. ဟီးးးး သင်္ဘောသီးပင် ခရမ်းရောင်ညွန့် (အရသာက ဟင်းနုနွယ်လိုဒါပေမယ့်တစ်မျိုး၊ ရန်ကုန်မှာတော့မစားဘူး အစေ့ဘဲ ကလေးတွေဆော့တာ.. ဒါပေမယ့်ဒီမှာတော့သူများစားကြတယ်) ခရမ်းသီးပင် ပင်စိမ်း နှင့် မုန်ညှင်းဖြူ မုန်ညှင်းစိမ်း / မုန်ညှင်းခါး ကန်ဇွန်းရွက် ကြက်ဟင်းခါးသီး (ဂျပန်စိုက်ခင်း) ခရမ်းချဉ်သီး ကန်ဇွန်းဥ ခင်း မုန်လာဥ(ပါပူးဝါး စိုက်ခင်း) ဒန့်သလွန် (ဖိလိပီနိုစိုက်ခင်း) ဆလတ်ရွက် (အမေရိကန်စိုက်ခင်း)